Golaha Wasiirada oo ka walaacsan dhibaatada lagu haya Soomaalida ku nool Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Wasiirada oo ka walaacsan dhibaatada lagu haya Soomaalida ku nool Kenya
10th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa, waxaana kulankan shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Ridwaan Xirsi Maxamed.
Kulanka ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen amniga dalka, dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Kenya, iyo gurmadka loo fidinayo dadka degan goobaha laga saaray Al-Shabaab.
Markii uu soo idlaaday kulan ayaa waxaa saxaafada la hadlay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga welwel santahay dhibaatooyinka haysta muwaadininta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya.
“Xukuumadda Soomaaliya waxay ka walaac santahay dhibaatooyinka baaxadda leh ee haysta dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Kenya, waxaana qoraalo looga hadlayo dhibaatooyinkaas loo diray Hay’adaha ku shaqada leh ee dowladda Kenya, waxaana ka rajaynaynaa in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo food saaray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenku.
Ugu danbayntii, Golaha ayaa ku baaqay in la dar-dar galiyo sidii gargaar bani-aadanimo oo deg deg ah loo gaarsiin lahaa dhammaan goobaha laga saaray Alshabaab oo hadda gaaraya ilaa sagaal degmo.
Waxaa sidoo kale Goluhu soo dhaweeyey booqashada uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda FS Dr, Cabdiweli Sheekh Axmed uu saaka ugu amba-baxay magaalooyinka Buulo Burde iyo Jowhar, taas oo calaamad u ah sida Xukuumadda uga go’an tahay in ay la tashiyo la samayso bulshada qaybaheeda kala duwan.
Kenya:Senator Bule protests being held in Eastleigh
Raysul Wasaaraha Soomaaliya booqasho gaaban ku tegay degmada Buulobarde ee Hiiraan